ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၌ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အကြား ကလေးငယ်များအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံရန်စီစဉ် - Xinhua News Agency
ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း နိစ်မြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာ၌ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကိုပင်ဟေဂင်၊ ဇွန် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၌ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြား ကလေးငယ်များအတွက် ဆန္ဒအလျောက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရေးကို ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလခန့်မှစ၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဒိန်းမတ်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Soren Brostrom က ဇွန် ၁၇ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အထက်ရှိသူတိုင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှုဟာ စက်တင်ဘာလမှာ ပြီးဆုံးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူထုကိုယ်ခံစွမ်းအားပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက် ၁၂ နှစ် မှ ၁၅ နှစ်ကြား ကလေးငယ်တွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဆောင်းရာသီအတွင်း ကပ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်” ဟု Brostrom ကပြောသည်။
ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့က အဆိုပါအစီအစဥ်မစတင်မီ ကလေးများနှင့် လူငယ်လူရွယ်များ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ‌ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်စီ (EMA) က မေလတွင် Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအား အသက် ၁၂ နှင့် အထက်ကလေးများအတွက် အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုချက်က ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်ကြားကလေးများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အား များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီ အတွင်း အတည်ပြုလူနာသစ် ၃၃၁ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၁ ဦးရှိပြီး အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၂၉၁,၀၁၇ ဦးနှင့် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၂,၅၂၈ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအေဂျင်စီဖြစ်သည့် Statens Serum အင်စတီကျု (SSI) အရ သိရသည်။
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၄၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် လူဦးရေ ၂.၉ သန်းနီးပါးသည် အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက် လူဦးရေ ၁.၅၇ သန်းခန့် သို့မဟုတ် ၂၆.၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း SSI မှ ဇွန် ၁၇ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
COPENHAGEN, June 17 (Xinhua) — Children in Denmark between the ages of 12 and 15 will soon be offered the opportunity to be voluntarily vaccinated against COVID-19, “possibly” from this September, Soren Brostrom, director general of the Danish Health Authority, said atapress conference here on Thursday.
The SSI said on Thursday that 49.5 percent of the Danish population, or nearly 2.9 million people, had already received at least one vaccine dose. Of them, some 1.57 million, or 26.9 percent, are fully vaccinated. Enditem
Photo-People wait to receive the COVID-19 vaccine atavaccination center in Nice, southern France, on April 10, 2021. (Photo by Serge Haouzi/Xinhua)